भगवान कृष्णको यो अद्भुत कहानी, जब भक्तका लागि यस्तो अनौठो काम गरे
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » भगवान कृष्णको यो अद्भुत कहानी, जब भक्तका लागि यस्तो अनौठो काम गरे
कन्हैयाको यो गजबको कथा
यदि भक्तको प्रेम निष्कपट छ भने भगवान उनको लागि खाली खुट्टा आउनुहुन्छ। साथसाथै कृष्ण कन्हैयाको कुरा आउँदा के भनौँ, आफ्ना भक्तका लागि उनले कति रूप धारण गरेका छन्, कति मनोरञ्जन गरेका छन्, थाहा छैन ।
जसको प्रमाण हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाइन्छ । यस्तै एउटा रोचक कथा छ जब कन्हैयाले आफ्ना भक्तका लागि अनौठो काम गरे । त्यसोभए यस बारे विस्तृत रूपमा जानौं‘ Krishna one of the most widely revered and most popular eighth incarnation avatar or avatara of the Hindu god Vishnu and also asasupreme god in his own right
यस्तै छ कन्हैयाको कथा
पौराणिक कथा अनुसार कुनै समय एक राजाले सहरमा मन्दिर बनाए जसमा श्रीकृष्णको मूर्ति पनि राखिएको थियो । तर उनलाई कहिल्यै पूजा गरेनन् । पूजा गर्न मन्दिरमा पुजारी राखिएको थियो ।
पुजारीले नियमित रूपमा कन्हैयाजीलाई नुहाउने र उनलाई ठूलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्थे। राजाले पनि कान्हाजीलाई दिनहुँ फूलको माला पठाउने गर्दथे र भेट्न आउँदा पुजारीले माला फुकालेर राजालाई लगाइदिन्थे । यसो गर्दा पुजारीको उमेर पनि बितिसकेको थियो ।
एक दिन राजा कुनै कारणले आउन नसकेपछि एक सेवकको हातमा मन्दिरमा माला दिएर आज म मन्दिरमा नआउने भन्दै पुजारीले उनलाई पर्खनु नपर्ने बताए । यति भन्दै नोकर बिदा भयो । सदाझैँ पुजारीले कन्हैयाजीलाई माला चढाए ।
तर जब साँझ पर्यो, पुजारीले सोच्न थाले, माला खोलेपछि कसलाई लगाउने ? आज यो माला म लगाउछु भनेर उसलाई लाग्यो । जे होस्, म बूढो भएँ । के थाहा जिन्दगी कहिले समाप्त हुन्छ ? यति सोचेर पुजारीले माला फुकालेर घाँटीमा हाले तर त्यतिकैमा नोकर आएर राजाको सवारी मन्दिरमा पुग्न लागेको बताए ।
त्यसपछि श्रीकृष्णले यस्तो रूप धारण गर्नुभयो
राजाको आगमनको खबर सुनेर पुजारी डराए । राजाले देखेमा बाँच्न नपाउने भय भयो । हतारमा पुजारीले माला फुकालेर कन्हैयाजीलाई फर्काए । राजा भित्र आउने बित्तिकै सधैं जस्तै पुजारीले कान्हाजीको घाँटीबाट माला खोलेर राजालाई लगाइदिए ।
तर मालामा सेतो कपाल देखेर राजाले यो माला पुजारी आफैले लगाएको बुझे । त्यसपछि के भयो, राजा रिसाए र रिसाउँदै पुजारीलाई सोधे मालामा सेतो कपाल कहाँबाट आयो ? राजाको कुरा सुनेर पुजारी डराए र भने कि यो कन्हैया कै हो ।
अब राजा झनै रिसाए किनभने कृष्ण देवता हो र उसको कपाल कसरी सेतो हुन्छ ? त्यसैले राजाले यो हुकुम सुने कि भोलि श्रृंगारको समयमा राजा आफै आएर कान्हाजीको साँच्चै कपाल सेतो छ कि पुजारी झुट बोलिरहेका छन् । पुजारीले झुट बोलेको भए अब बाँच्न नपाउने निर्णय बताए ।
त्यसपछि पुजारीले कन्हैयालाई यस्तो कुरा भने
राजाको आदेश सुनेर पुजारी निकै दुःखी भए । अब के गर्ने, कहाँ जाने ? अब उनको मृत्यु निश्चित छ। त्यसपछि रुँदै रुँदै भगवानको शरणमा पुगे र भने कि हे केशव, मैले मसँग झूट बोलेको अपराध गरेको छु, तर सम्भव भएमा मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई राजाबाट रक्षा गर्नुहोस्।
पुजारीले भने– हे माधव तिम्रो सेवा गर्दागर्दै म बूढो भएँ । अब माफ गरिदेउ, यस्तो गल्ती म बाट फेरी नदोहोरियोस् । यसो भनिरहँदा पुजारीको आँखा कहिले बन्द भयो र बिहान कहिले खुल्यो थाहा भएन ।
अर्कोतिर बिहान उठ्नेबित्तिकै राजा पनि आएर आज भगवान कृष्णको श्रृंगार आफैं गर्ने बताए । यसो भन्दै राजाले कृष्णको मुकुट उतार्नेबित्तिकै श्रीकृष्णको सबै कपाल सेतो भएको देखे । तर राजाले अझै पत्याएनन्। उनलाई लाग्यो कि पुजारीले मृत्युको डरले आफ्नो कपाल रंगाएको हुनुपर्छ।
त्यसपछि कन्हैयाको मूर्तिबाट रगत बग्न थाल्यो ।
राजाले कन्हैयाजीको एउटा कपाल निकालेर हेर्नु पर्ने सोचे । यसपछि राजाले कान्हाजीको एउटा कपाल निकाले ।
तर कपाल फुट्नेबित्तिकै कन्हैयाको टाउकोबाट रगत बग्न थाल्यो । यो देखेर राजा भगवानको पाउमा परेर माफी माग्न थाले । तब श्रीकृष्णको मूर्तिबाट आवाज आयो, हे राजन । तिमीले मलाई मूर्ति मात्र ठान्यौ, त्यसैले आजदेखि म तिम्रो लागि मूर्ति मात्र हुनेछु।
तर पुजारीले मलाई साँचो हृदय र पूर्ण भक्तिले पूजा गरेका छन्। त्यसैले उहाँको अनन्य भक्ति देखेर मैले कपाल सेतो रंगाउनु पर्यो । कन्हैयाजीले भक्तिमा कहिल्यै शंका नगर्ने र म सच्चा भक्तको लाज कहिल्यै छोड्दिनँ भन्नुभयो । यो सुनेपछि राजाले पश्चताप गरे ।